Onyinye maka nne na nna meworo okenye | Ndị Nne Taa
Alicia tomero | 26/09/2021 10:00 | Atụmatụ, Ezinụlọ
Ebe i nwere ike ịhụ ụfọdụ echiche na onyinye maka nne na nna meworo okenye. Ọ bụ ezi onyinye mgbe niile ịnwe ịnye ihe ga -amasị ha na ụbọchị ụfọdụ, dịka ụbọchị ọmụmụ, ekeresimesi, mmemme ma ọ bụ ncheta afọ. Onyinye na -ahapụ akara ha na anyị agaghị echefu nke ahụ mepụta oke mmetụta na nnukwu ọnụ ọchị.
Ị ga -enyefe onyinye mara mma nke masịrị gị n'oge, dị ka ụtọ gị na mkpa gị si dị. Anyị ga -achọrịrị ndị ga -adaba na afọ, mana anyị enweghị ike were ogo ahụ dị ka ntụaka, ebe ọ bụ na onyinye ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ bụ nke mbụ nwere ike dabara ụkpụrụ niile.
1 Ndụmọdụ onyinye maka nne na nna meworo okenye
1.1 Ntụziaka akwụkwọ
1.2 Getaways ịnụ ụtọ
1.3 Ndekọ foto
1.4 Akwụkwọ na -enwe mmasị ịgụ ihe
1.5 Ụlọ nri
1.6 Okooko osisi maka ime ma ọ bụ ogige ụlọ
1.7 Dị mkpa ma dị mfe nghọta teknụzụ
Ndụmọdụ onyinye maka nne na nna meworo okenye
Ka ịhọrọ nkọwa zuru oke yana nke masịrị gị, anyị ga -enyocha ya n'ime onye ahụ. N'ezie ị nwere ihe omume ntụrụndụ dịka nka, ị na -enwe mmasị iri ihe ụtọ, esi nri, gụọ akwụkwọ, njem ... n'ezie ọ ga -amasị gị ma ọ bụrụ na ejiri nnukwu ịhụnanya nye ya.
Anyị na -ahụ ọtụtụ akwụkwọ n'ahịa nwere ike dabara dabere na uto maka isi nri. Ha nwere ike bụrụ akwụkwọ a kapịrị ọnụ iji mee achịcha achịcha ma ọ bụ akwụkwọ nwere mbido mbụ. Obi abụọ adịghị ya, a ga -esi nri ya n'otu ihe omume.
Getaways ịnụ ụtọ
Anyị nwere ike ịchọta ngwugwu iji nwee ọ enjoyụ ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ n'ahịrị na njem ime obodo, ahụmịhe na okike, spas ma ọ bụ nri ihunanya n'ebe nrọ. Spas bụ ndị a na -achọkarị, ebe ha zuru oke maka ndị nwere afọ ole na ole. Ewezuga ịnụ ụtọ izu ike ha, ha bara uru na ahụike
Nke a bụ otu n'ime onyinye na -amasịkarị na ọ bụ ịhapụ ọmarịcha M na -echeta a dum trajectory. Ị nwere ike ịme album ma ọ bụ rịọ ka eme ya, kedu? Ọ dị mfe ma ọ bụrụ na ị nwere ntakịrị ihe ọmụma n'ịrụ kọmputa. Ọ nwere ike budata mmemme nke ahụ ga -egosi otu esi eji usoro iji mepụta aha na ịtinye foto.
N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịmepụta akwụkwọ nwere ụzọ nke ndụ ndị ahụ, malite mgbe ha dị obere ruo mgbe ha mụrụ ụmụ ma ọ bụ ụmụ ụmụ. Ị ga -agbalịrị ịse foto ma tinye ha na digitize ka i wee jiri ha mee ihe. N'ezie, ọ bụ onyinye pụrụ iche.
Akwụkwọ na -enwe mmasị ịgụ ihe
Na mbụ, ọ bụ ụzọ iji mee onwe gị obi ụtọ ma mee ka ịgụ ihe bụrụ ihe agbamume dị ukwuu. Enwere ọtụtụ akwụkwọ emegharịrị maka akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ ihe omimi akpali nnọọ mmasị. Ịgụ ihe abụghị ọrụ na -amasị onye ọ bụla, mana ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ inye akwụkwọ dị ka onyinye, enwere ndị emegharịrị maka ịgụ ihe dị mfe yana isiokwu na -ejide, na enweghi ngwụcha foto.
Enwere ọtụtụ ihe metụtara kichin ị nwere ike ịmasị. Site na iko ahaziri na foto gị, ma ọ bụ gị na onye ezinụlọ ebe ị nwere ike tinye ozi dị mma.
E nwere obere ngwa ndị nwere ike ime ka ndụ mmadụ dịkwuo mfe. Ngwakọta ihe ị drinkụ smoothies mkpụrụ osisi dị mma yana inyere gị aka lekọta onwe gị anya. Mma mma iji nọrọ ebe ọ bụla, akwa mkpuchi ahaziri iche ma ọ bụ ngwa nri maka ndị hụrụ isi nri n'anya.
Okooko osisi maka ime ma ọ bụ ogige ụlọ
Osisi abụghị ihe ntụrụndụ ụmụ nwanyị, enwere ụmụ nwoke ndị ha na -echegbu onwe ha, na ọ bụ ya mere ọ nwere ike bụrụ onyinye zuru oke maka unu abụọ. Nke kacha mma bụ osisi nke nwere ike inye ifuru ma ọ bụ obere osisi nke nwere ike inye ụdị mkpụrụ osisi, ee, maka ogige dị n'èzí.
Dị mkpa ma dị mfe nghọta teknụzụ
Ekwentị mkpanaaka dị mkpa yana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe dị mkpa, enwere ụdị ndị emebere ka ha nwee ike iji ya dị mfe na nwere ike ịgụ ha n'enweghị nsogbu. Ọbụna inyefe mbadamba bụ ezigbo echiche ka ha nwee ike ijikwa ụfọdụ ịntanetị wee jiri ngwa ha chọrọ. Naanị usoro atọ dị mfe ị nwere ike nweta ụdị teknụzụ a na site na ntachi -obi, enwere ike kuziere ha ịmụta ihe.
Enwere n'ezie onyinye a na -apụghị ịgụta ọnụ na ndị kacha amasị ha bụ ndị ahaziri iche, ọbụlagodi na ha bụ obere nkọwa, ha na -enwe mmetụta nke ukwuu. Ihe kacha ewu ewu bụ mmanya ma ọ bụ ihe ọ drinksụ drinksụ ndị ahaziri iche. Na ihe ikpeazụ nkeji bụ ike kechie onyinye jiri akwụkwọ ahaziri iche, ya bụ, were foto onye ga -anata onyinye ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị nne Taa » Ezinụlọ » Atụmatụ » Onyinye maka nne na nna meworo okenye
Chocolate riri nwa m nwoke, gịnị ka m ga -eme?